Ukuphupha ngokuluma Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Yonke imihla siluma into ethile okanye into. Nokuba yiapile, isonka kunye nebhotolo, okanye isidlo sasemini esimnandi. Amazinyo ethu adla ngokubaluleka kwinyathelo lokuqala lokwetyisa, kuba ukutya kwethu kuhlala kunzima kwaye kufuneka kuqala kusikwe ngaphambi kokuba kuginywe. Nangona kunjalo, ayinakuluma kuphela ukutya, ngakumbi kubukumkani bezilwanyana yindlela efanelekileyo yokuzikhusela okanye yokuhlasela. Abantu ngamanye amaxesha bayaluma; Kusafuneka abantwana bafunde ukuba ukuluma kubangela iintlungu kwaye kwenzakalisa abanye kwaye ke akuvumelekanga.
Kuthetha ntoni ukuluma ephupheni ngoku? Kutheni le nto luphawu lweli phupha? Cinga kwakhona ngephupha lakho, unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha. Ukhe walunywa okanye ukhe waluma umntu okanye into? Uzive njani ngayo? Ukutolikwa kwephupha, ayibalulekanga kuphela uphawu lwephupha, kodwa nazo zonke iimeko ezihamba nazo ekufuneka zibandakanyiwe kuhlalutyo.
Ngendlela, ikwathi imibala inokuluma enye kwenye. Umntu angathanda ukuveza ukuba ubuncinci imibala emibini ayingqinelani, umzekelo, xa ukhetha iimpahla. Kuba eli nqaku limalunga nokuluma ngengqondo yokuluma, kuya kufuneka ucofe inqaku lethu elihambelanayo elithi "Imibala" xa uphupha imibala yokuluma nokutolika iithoni ezibonwe ngexesha lokulala ngokukodwa.
1 Uphawu lwephupha «ukuluma» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuluma» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuluma» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuluma» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika isimboli yamaphupha "ukuluma" njengelizwi elibi. Xa uphupha ungathanda ukulungisa umba kwi el mundo Ukusuka kumlindo, kodwa le nto kudala yahamba. Ngamanye amaxesha, ukulunywa ephupheni kukwabonisa ukuba iphupha liyasokola kwilizwe elivukayo lomntu ongendawo, njengoko ethuthunjiswa yile nto.
Ukuluma okanye ukuluma kubonisiwe ephupheni. Ukulwa kubudlelwane, ekulunge ngakumbi ukubanalo iphupha. Kwakhona, uphawu lwephupha kule meko lunokubonisa ubutshaba obunzulu.
Ukuba iphupha lilunywe ngumfazi ephupheni, oku kunokuqondwa njengesibhengezo sesifo. Kwangelo xesha, ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kukwatolika le meko yamaphupha njenge isilumkiso Phambi komnqweno wephupha lokutshabalalisa iziqhamo zomsebenzi wabo omde.
Ukubona kwenxeba lokulunywa sisilwanyana ephupheni kufanekisela umona. Ukuba iphupha lilunywe sisilwanyana ephupheni, oku kuyakubonisa oku. ingxaki y ingxaki kwimicimbi yothando, ingxabano inokwenzeka. Ngokumalunga nokulunywa kwesilwanyana, ukutolikwa kwamaphupha ngokubanzi kuyaziwa nangakumbi:
Ukuluma ikati: kungabonisa ukungcatshwa kunye nokulwa kwikati yendlu enobundlongondlongo; Ukuba isilwanyana siziphatha ngenye indlela ngokuzolileyo ephupheni, sicocekile kwaye sizithembile, uthando olukhulu lweekati, oluzivayo iphupha, luyacaca
Ukulunywa yinja -Izithintelo ezinkulu zemali zinokulindelwa kwihlabathi labalindi; Ukuba inja ephambeneyo iluma iphupha, oku kubonisa intlungu kunye noloyiko lokungabikho komntu omthandayo ixesha elide.
Ukulunywa yinyoka: kwihlabathi lokuvuka umntu othile kwindalo esingqongileyo ubanga ukuba wenza ukuthanda kwephupha, ngelixa elokugqibela lilandela elakhe kuphela; Kwakhona cebisa ukuba uthuke ngokungekho mthethweni umhlobo kwilizwe leewotshi; kuya kufuneka uyivume ngokukhawuleza impazamo yakho kwaye ucele uxolo.
Uphawu lwephupha «ukuluma» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwephupha, uphawu lwephupha "uluma" okanye ulume umsindo "isilwanyana" y Ubundlongondlongo. Ngokukodwa ukuba iphupha lishiye uluvo olubi ephupheni. Ukwenzakalisa umntu okanye isilwanyana ephupheni kubonisa iziphumo kwindalo esingqongileyo - ixhoba lokuluma lichaphazeleka kukuhlaselwa.
Ukuba iphupha liluma omnye umntu okanye isiqhamo ephupheni, oku kukubonisa ukuba kuya kufuneka unamathele ngokupheleleyo ekuphunyezweni kwesicwangciso sakho ebomini bokuvuka. Ephupheni eloticous lifanekisela ukuluma, ukubamba indlebe nokuhlafuna ephupheni. isini esigqithisileyo yokuphupha. Ngokukodwa kwiminqweno yesadomasochistic, uphawu lwephupha luvela rhoqo.
Uphawu lwephupha «ukuluma» - ukutolika kokomoya
Kuthathelwa ingqalelo ngokomoya uphawu lwephupha "lokuluma" kufuneka lenze ukuba umphuphi azi ukuba yena ukhohlakele kanye njengokuba abanye banokuba nobubi kuye.